Warshadda gubta Shiinaha iyo soosaarayaasha | LYBH
Sida qalabka isdhexgalka korantada oo leh heer sare oo otomaatig ah, gubiyaha ayaa loo qaybin karaa shan nidaam: nidaamka bixinta hawada, nidaamka dabka, nidaamka kormeerka, nidaamka shidaalka iyo nidaamka xakamaynta elektarooniga ah.
Nidaamka bixinta hawada
Shaqada nidaamka hawo bixinta ayaa ah inay ku quudiso hawo xawaare dabeyl iyo mug leh qolka gubashada. Qaybaheeda ugu waaweyn waa: qolof, matoor mashiinka, mashiinka wax kiciya, tuubada dabka hawada, hawo xakamaynta, jahwareerka qulqulaya, farsamaynta CAM nidaaminta iyo disc baahinta.
Shaqada nidaamka dabka waa inuu shido isku dhafka hawada iyo shidaalka. Dhererka ololka, xaglaha koorta iyo qaabka waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida qofka isticmaala.
Shaqada nidaamka kormeerku waa in la hubiyo hawlgalka nabdoon ee xasilloon ee gubta. Qaybaheeda ugu muhiimsan waa kormeerka ololka, kormeerka cadaadiska iyo kormeerka heerkulka.
Shaqada nidaamka shidaalka ayaa ah in la hubiyo in gubuhu gubayo shidaalka lagama maarmaanka ah. Nidaamka shidaalka ee shidaalka gubi inta badan waxaa ka mid ah: dhuumaha saliida iyo isku-darka, mashiinka saliida, sool-gaabka, biiyaha, preheaterka saliida culus. Wax gubayaasha gaasku badanaa waa miirayaal, jaangooyeyaal, solenoid waalka kooxda, suuxdinta solenoid koox, waalka balanbaalis shidaalka.
Nidaamka xakamaynta elektiroonigga waa xarunta taliska iyo xarunta xiriirinta ee nidaamyada kor ku xusan. Qaybta ugu weyn ee xakamaynta waa kantaroolaha barnaamijka, kaas oo lagu qalabeeyay barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay gubiyaasha kala duwan. Barnaamijyada guud waxaa ka mid ah: taxanaha LFL, taxanaha LAL, taxanaha LOA iyo taxanaha LGB.
1. Gubasho buuxda, awood u leh inuu la qabsado isbedbeddelka cadaadiska, is-xakameynta qaybinta hawada mar, gubasho buuxda.
2. Waxqabad wanaagsan oo nabadgelyo leh.
3. Nidaamka shidaalku wuxuu xakameynayaa soosaarka saliida si looyareeyo isticmaalka.
4. Nidaamka xakamaynta korantada wuxuu dabaysha ku xaaqaa 30 ilbiriqsi, taas oo ku habboon, dhakhso leh, aamin ah oo xasilloon.
5. Qolofta dahaarka kulul ee qolofku waxay ka ilaalin kartaa mashiinka waxyeellada, mashiinka wuxuu ka dhigaa mid si xasiloon u socda oo cimri dheereeya.
Hore: Wax Iibsiga Weyn ee Warshadda Dib-u-warshadaynta Rubber - Warshadda qashinka ee pyrolysis - LYBH
Xiga: kululeeyaha qaxa kulul
Warshad Pyrolysis joogto ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Caaga, Dufcaddii Pyrolysis Plant, Taayirada Pyrolysis, Sifee caag ah, Mashiinka Dib-u-warshadaynta Taayirada Qashinka,